ပျိုမေတို့ရဲ့ Period Time မှာနာကျင်မှုလျော့နည်းစေအောင်…👩😉😉 – Trend.com.mm
ပျိုမေတို့ရဲ့ Period Time မှာနာကျင်မှုလျော့နည်းစေအောင်…👩😉😉
Posted on October 7, 2018 October 1, 2018 by Shun Lei Phyo
မိန်းကလေးတိုင်းအတွက်သဘာဝလို့ဆိုနိုင်သလို ၀န်ထုတ်ဝန်ပိုကြီးတစ်ခုလိုလည်းဖြစ်စေတဲ့ ဓမ္မတာလာခြင်းမှာတစ်ချို့သောမိန်းကလေးတွေကမခံမရက်နိုင်အောင်နာကျင်ခံစားတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုနာကျင်ခြင်းသက်သာအောင်ဘယ်လိုနည်းလေးတွေသုံးကြည့်သင့်လဲဆိုတာ…
တစ်ချို့သောမိန်းကလေးတွေကတော့ရာသီသွေးဆင်းတဲ့အချိန်မှာနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းမရှိပေမဲ့တစ်ချို့မိန်းကလေးတွေကတော့ အရမ်းကို ဗိုက်တွေအောင့်ခါးတွေကိုက်ရင်သားတွေတင်းပြီးနေရခက်တတ်ကြပါတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ ခါးကိုက်ပြီးဗိုက်အောင့်တာပါပဲ။ မခံမရပ်နိုင်အောင်ဆီးစပ်ကနေအောင့်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုတွေဖြစ်တတ်တဲ့သူဟာ ရာသီလာတဲ့အချိန်ဖြစ်စေ မလာသေးတဲ့အချိန်ဖြစ်စေနေ့စဉ်မှန်မှန်သွေးအားတိုးဆေးတစ်ခုသို့ အမျိုးသမီးရောဂါအတွက်သင့်တော်မဲ့ဆေးတစ်မျိုးကိုစွဲသောက်သင့်ပါတယ်။ ဖြစ်တော့မှာ အကိုက်ခဲပျောက်ဆေး တွေ ဗိုက်အောင့်သက်သာစေတဲ့ဆေးတွေ သောက်မဲ့အစား သွေးအားတိုးဆေးလို့ဆေးမပြင်းတဲ့အရာမျိုးကို ပုံမှန်စွဲသောက်ပေးခြင်းဖြင့်တကယ်လာတဲ့အချိန်မှာနာကျင်ကိုက်ခဲမှုကိုလျော့ကျစေပါတယ်။
အာ့လို အချိန်မှာခြေဖျားလက်ဖျားနဲ့ဗိုက်တွေခါးတွေကို ဆေးပူပူနဲ့လိမ်းပြီးမှောက်အိပ်တာမျိုး၊ ရေနွေးအိတ်ကိုဆီးစပ်နားကိုကပ်ပေးတာမျိုးလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ခါးကိုက်တာ ဗိုက်အောင့်တာသက်သာစေပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို အနွေးဓာတ်ရစေတာမို့ သွေးစီးဆင်းမှုအားပိုကောင်းစေပါတယ်။
ဒီလိုချိန်မှာသွေးအားကောင်းစေမဲ့ အစားစာတွေကိုများများစားပေးပါ။ အစားကောင်းကောင်းဝင်မှသွေးအားကောင်းလာနိုင်ပြီး သွေးအားကောင်းနိုင်မှလည်း ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ခါးကိုက်ခြင်းတွေကင်းဝေစေမှာမို့ သွေးအားကောင်းစေတဲ့အစားအစာတွေများများစားပေးပါ။
4. လာခံနီးတစ်ပတ်လောက်အလိုမှာ ချဉ်ငန်စပ်စားတာလျော့ပါ
လာနေတုန်းရှောင်ရင်ရတာပဲလို့မလုပ်ကြပါနဲ့။ လာခံနီးတစ်ပတ်လောက်အလိုမှာ အချဉ်အစပ်တွေမျာ တရားစားထားမိပြီဆိုရင် ဓမ္မတာလာတဲ့အချိန်မှာ အဲ့ဒဏ်ကို ခံရပြီသာမှတ်ပါ။
5. ဂျင်းပြုတ်ရည် သောက်ပေးပါ
ဂျင်းပြုတ်ရည်ပူပူလေးကိုကျိုပြီးသောက်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဂျင်းပြုတ်ရည်သောက်ခြင်းကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းကို ပူနွေးသွားစေတာကြောင့် သွေးလည်ပတ်မှုအားကိုပိုကောင်းစေပြီးရာသီသွေးကို ဆင်းသင့်သလောက်ဆင်းစေပါတယ်။
မိနျးကလေးတိုငျးအတှကျသဘာဝလို့ဆိုနိုငျသလို ဝနျထုတျဝနျပိုကွီးတဈခုလိုလညျးဖွဈစတေဲ့ ဓမ်မတာလာခွငျးမှာတဈခြို့သောမိနျးကလေးတှကေမခံမရကျနိုငျအောငျနာကငျြခံစားတတျကွပါတယျ။ ဒီလိုနာကငျြခွငျးသကျသာအောငျဘယျလိုနညျးလေးတှသေုံးကွညျ့သငျ့လဲဆိုတာ…
တဈခြို့သောမိနျးကလေးတှကေတော့ရာသီသှေးဆငျးတဲ့အခြိနျမှာနာကငျြကိုကျခဲခွငျးမရှိပမေဲ့တဈခြို့မိနျးကလေးတှကေတော့ အရမျးကို ဗိုကျတှအေောငျ့ခါးတှကေိုကျရငျသားတှတေငျးပွီးနရေခကျတတျကွပါတယျ။ အဆိုးဆုံးကတော့ ခါးကိုကျပွီးဗိုကျအောငျ့တာပါပဲ။ မခံမရပျနိုငျအောငျဆီးစပျကနအေောငျ့တတျကွပါတယျ။ ဒီလိုတှဖွေဈတတျတဲ့သူဟာ ရာသီလာတဲ့အခြိနျဖွဈစေ မလာသေးတဲ့အခြိနျဖွဈစနေစေ့ဉျမှနျမှနျသှေးအားတိုးဆေးတဈခုသို့ အမြိုးသမီးရောဂါအတှကျသငျ့တျောမဲ့ဆေးတဈမြိုးကိုစှဲသောကျသငျ့ပါတယျ။ ဖွဈတော့မှာ အကိုကျခဲပြောကျဆေး တှေ ဗိုကျအောငျ့သကျသာစတေဲ့ဆေးတှေ သောကျမဲ့အစား သှေးအားတိုးဆေးလို့ဆေးမပွငျးတဲ့အရာမြိုးကို ပုံမှနျစှဲသောကျပေးခွငျးဖွငျ့တကယျလာတဲ့အခြိနျမှာနာကငျြကိုကျခဲမှုကိုလြော့ကစြပေါတယျ။
အာ့လို အခြိနျမှာခွဖြေားလကျဖြားနဲ့ဗိုကျတှခေါးတှကေို ဆေးပူပူနဲ့လိမျးပွီးမှောကျအိပျတာမြိုး၊ ရနှေေးအိတျကိုဆီးစပျနားကိုကပျပေးတာမြိုးလုပျပေးသငျ့ပါတယျ။ ဒီလိုလုပျပေးခွငျးဖွငျ့ ခါးကိုကျတာ ဗိုကျအောငျ့တာသကျသာစပွေီး ခန်ဓာကိုယျကို အနှေးဓာတျရစတောမို့ သှေးစီးဆငျးမှုအားပိုကောငျးစပေါတယျ။
ဒီလိုခြိနျမှာသှေးအားကောငျးစမေဲ့ အစားစာတှကေိုမြားမြားစားပေးပါ။ အစားကောငျးကောငျးဝငျမှသှေးအားကောငျးလာနိုငျပွီး သှေးအားကောငျးနိုငျမှလညျး ဗိုကျအောငျ့ခွငျး၊ခါးကိုကျခွငျးတှကေငျးဝစေမှောမို့ သှေးအားကောငျးစတေဲ့အစားအစာတှမြေားမြားစားပေးပါ။
4. လာခံနီးတဈပတျလောကျအလိုမှာ ခဉျြငနျစပျစားတာလြော့ပါ
လာနတေုနျးရှောငျရငျရတာပဲလို့မလုပျကွပါနဲ့။ လာခံနီးတဈပတျလောကျအလိုမှာ အခဉျြအစပျတှမြော တရားစားထားမိပွီဆိုရငျ ဓမ်မတာလာတဲ့အခြိနျမှာ အဲ့ဒဏျကို ခံရပွီသာမှတျပါ။
5. ဂငျြးပွုတျရညျ သောကျပေးပါ
ဂငျြးပွုတျရညျပူပူလေးကိုကြိုပွီးသောကျပေးသငျ့ပါတယျ။ ဂငျြးပွုတျရညျသောကျခွငျးကွောငျ့ ခန်ဓာကိုယျအတှငျးပိုငျးကို ပူနှေးသှားစတောကွောငျ့ သှေးလညျပတျမှုအားကိုပိုကောငျးစပွေီးရာသီသှေးကို ဆငျးသငျ့သလောကျဆငျးစပေါတယျ။